सगरमाथाको उचाई कति ? चिनियाँ टोली पनि सगरमाथा आरोहणमा | News Polar
सगरमाथाको उचाई कति ? चिनियाँ टोली पनि सगरमाथा आरोहणमा
न्यूजपोलार बैशाख ३०, २०७७, मंगलबार
नेपालले आफ्नो डाटा प्रसेसिङको काम सम्पन्न गरे पनि चिनियाँ पक्षसँग भएको एउटा सहमतिले अन्यौल बढाएको छ
सगरमाथाकाे उचाइ नाप्ने टाेली (फाइल तस्वीर)
काठमाडौंः विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाई बारे खासै विवाद छैन, तर नेपाल र चीनका प्राविधिकहरु सगरमाथाको उचाई पुनः नाप्ने बारेमा आआफ्ना तर्फबाट प्रयासरत छन् ।
सबैलाई थाहा छ, सगरमाथाको आधिकारिक उचाई ८,८४८ मिटर नै हो । पछिल्लो पटक केहीले सगरमाथाको उचाई २ मिटर (७ फिट) घटेको दाबी गरेपछि सगरमाथाको उचाईको यथार्थ पुनः पत्ता लगाउने प्रयास थालिएको हो ।
सर्वप्रथम बेलायती एक्सपिडिसनले सगरमाथाको उचाई निक्र्यौल गरेको थियो, र यसलाई आज पर्यन्त स्वीकार गरिएको छ । यसबीचमा विज्ञान र प्रविधिमा अभूतपूर्व विकास भइसकेको सन्दर्भमा सगरमाथाको उचाई पुनः नाप्ने योजना अघि सारिएको छ ।
नेपाल र चीनको सीमाक्षेत्रमा नेपालतर्फ दक्षिण मोहडा बनाएको विशाल सगरमाथालाई तेस्रो ध्रुवका रुपमा समेत लिइन्छ । यस पर्वतको शिखर चुम्न विश्वका सबै धूरन्धर पर्वतारोहीका लागि आखिरी चाहना हुने गरेको छ ।
सन् १९५५ मा इन्डियन सर्भेले निकै ठूलो अभियान संचालन गरी चीनमा चोमोलोङमा भनेर चिनिने सगरमाथाको उचाई ८,८४८ मिटर (२९,०२९ फिट) रहेको घोषणा गरेका थिए । यो उचाईलाई नेपाल र चीन दुबैले मान्यता दिएका थिए । तर सन् १९७५ मा चीनले फेरि सगरमाथाको उचाई मापन गरी ८,८४८ मिटर नै रहेको प्रमाणित गरेको थियो ।
सन् १८६५ मा सगरमाथालाई बेलायतको “रोयल जोग्राफिकल सोसाइटी”ले माउन्ट एभरेष्ट नामकरण गरेको थियो ।
केही वैज्ञानिकले सगरमाथाको उचाई हरेक वर्ष २ इन्चको दरले वृद्धि हुँदै गएको दाबी गरेका छन् । यसो हेर्दा वर्षको २ इन्चको खासै महत्व नहोला, तर धेरै वर्ष व्यतित भएपछि यसको महत्व अवश्य बढ्छ ।
बोस्टन म्युजियम अफ साइन्सका प्राध्यापक एवं सुप्रसिद्ध हिमाली कार्टोग्राफर ब्राड वासबर्न र उनको टोलीले सगरमाथाको उचाई पुनः गणना गरेको थियो । यो टोलीले सगरमाथाको उचाई ७ फिट बढेको देखायो अर्थात् सगरमाथाको उचाई ८,८५० मिटर (२९,०३५ फिट) । यसक्रममा सगरमाथाको शिखरमा राडार सहितको जिपिएस प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको थियो ।
तर सन् २०१५ अर्थात् २०७२ सालको महाभूकम्पका कारण सगरमाथाको उचाई केही घटेको अनुमान गरिएको छ । उचाई बढेको वा घटेको भन्ने विवाद बढेसँगै नेपाल सरकारले सगरमाथाको उचाई नाप्ने योजना बनाएको छ, र यो अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
सगरमाथाको उचाई नाप्न नेपाली टोली
सगरमाथाको उचाई नाप्ने कार्य यति सजिलो पक्कै होइन, थिएन । नेपाल सरकारले यो चुनौतीपूर्ण कार्यलाई विश्वासिलो, वैज्ञानिक रुपमा तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट स्वीकार्य बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्नुको विकल्प हुँदैन । नेपाल सरकारले सर्भे विभाग मातहत रहने गरी “सगरमाथा उचाई मापन सचिवालय गठन” गरेको छ, र यही सचिवालयले सगरमाथाको उचाईसँग सम्पूर्ण कार्य गरिरहेको छ ।
सिरहाको मादरलाई आधार मानेर सगरमाथाको उचाई नाप्ने अभियानको नेतृत्व गरेको थियो सुशील डंगोलको टिमले । यस टिमका सदस्यले सन् २०१९ को मे २२ मा सगरमाथाको सफलतापूर्वक आरोहण समेत गरेको छ । यो टिमको नेतृत्व प्रमुख सर्भे अधिकृत खिमलाल गौतमले गरेका थिए भने टोलीमा सर्भे अधिकृत रबिन कार्की सहित अरु पर्वतीय गाइडहरु सहभागी थिए । यो टिमले सगरमाथाको शिखरमा १ घण्टा १६ मिनेट बिताएर जिएनएसएस अब्जरभेसन र जिपिआर सर्भे गरेको थियो ।
अहिले नेपाली टोली के गर्दैछ ?
नेपाली टोलीले झण्डै २ वर्ष लगाएर सगरमाथाको उचाईसँग सम्बन्धित तथ्याँक विवरण संग्रह गरिसकेको छ । प्रमुख सर्भे अधिकृत एवं यस परियोजनाका संयोजक सुशील डंगोल सगरमाथाको उचाई मापन कार्य अत्यन्त सही मार्गमा रहेको र निकट भविष्यमै आधिकारिक घोषणा गर्ने गरी दिनरात काममा जुटेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन् – हामीले फिल्ड वर्क सकेका छौं, एक्सपिडिसनको कार्य सकिएको छ र मेजरमेन्ट (मापन) को काम सकिएको छ ।
यी सबै काम सकिए पनि मुख्य काम भनेको संग्रहित तथ्याँकीय विवरणलाई प्रशोधन (प्रसेसिङ) गर्नु हो । अहिले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारी साथीहरु यही डाटा प्रसेसिङमा खटिनु भएको छ, डंगोल भन्छन् । यो कार्य सम्पन्न गर्न करिब डेढ महिना लाग्ने उनको भनाई छ ।
नेपालले आफ्नो डाटा प्रसेसिङको काम सम्पन्न गरे पनि चिनियाँ पक्षसँग भएको एउटा सहमतिले अन्यौल बढाएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका समयमा दुबै देशद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सगरमाथाको उचाई संयुक्त रुपमा घोषणा गरिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सहमति अनुसार नेपालले एकलौटी रुपमा सगरमाथाको उचाई घोषणा गर्न सक्दैन ।
चीन सरकारले हालै मात्र सगरमाथाको उचाई नाप्न प्राविधिक टोली तिब्बत तर्फबाट सगरमाथा पठाएको समाचार चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले प्रकाशन गरेको छ । यो टोलीले सगरमाथाको आरोहण अझै गरेको छैन । सम्भवतः केही दिनभित्रै चिनियाँ टोली सगरमाथाको शिखरमा पुग्नेछ । त्यसपछि उनीहरुले तथ्याँक विश्लेषणका लागि समय लगाउनेछन् । त्यसर्थ सगरमाथाको उचाईको यथार्थ थाहा पाउन अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रकाशित : बैशाख ३०, २०७७, २३:१९:३०